कास्की २ मा विद्याको नाम मात्र सिफारिश गर्ने निर्णय किन उल्टियो ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
कास्की २ मा विद्याको नाम मात्र सिफारिश गर्ने निर्णय किन उल्टियो ?
प्रकाशित मिति : २०७६, १४ कार्तिक बिहीबार १०:४०
पोखरा । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गण्डकी प्रदेश कमिटीले आसन्न कास्की क्षेत्र नम्बर दुईको उपनिर्वाचनका लागि तीन जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिफारिश हुनेमा स्व पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराईसहित सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ र राजकाजी गुरुङ ‘करण’ रहेका छन् । प्यासी नेकपाका पुराना वामपन्थी नेता हुन् भने करण विगत २०७४ को निर्वाचन कास्की २ (ख) बाट प्रदेशसभामा झिनो मतले पराजित हुन् ।
यसअघि नेकपा जिल्ला कमिटीको कात्तिक ८ गतेको निर्णयले विद्या भट्टराईको एकल नाम सिफारिश गरे पनि केन्द्रले तीन जनाको नाम सिफारिश गर्न भनेकाले दुई जनाको नाम थपिएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।